Isibindi senkomo esithosiwe esheshayo nesilula | Ukupheka Kwekhishi
Isibindi senkomo esithosiwe esilula
Kukhishwe encwadini yokupheka 1080 nguSimone OrtegaI-classic yokupheka kwaseSpain, iresiphi yanamuhla ingabhekwa njengeqoqo lamathiphu, kunokuba iresiphi uqobo. Futhi ukuthosa isibindi ngendlela elula, nakho kunamaqhinga aso.
USimone Ortega uyasincoma Fry isibindi emafutheni angashisi kakhulu futhi inkathi ngeviniga. Le yindlela engijwayele ukukwenza ngayo, yize amathuba alo mkhiqizo ovelele maningi. Ungahambisa lezi zibopho ngogalikhi othosiwe, imifino kanye / noma amazambane othosiwe ukuze unikeze ukunambitheka okwengeziwe.
Izibopho zesibindi eziyi-6
3/4 yengilazi kawoyela
Isipuni esingu-1 sepharsley
1 isipuni uviniga
Le micu iyalungiswa, ifakwe usawoti futhi ithosiwe iningi hhayi uwoyela oshisayo kakhulu; isibindi kufanele sitholwe kancane futhi singaphucwa. Njengoba zithosa, zifake emthonjeni lapho zizokhonzwa khona bese zimbozwa ukonga ukushisa.
Epanini elifanayo, sifaka uviniga ukususa ipani emlilweni ukuze uwoyela ungagxumi. Sishisa kahle ingxube futhi siyisebenzise njengesosi yezinhlamvu.
Fafaza iparsley oqoshiwe ngaphezulu kwezibopho bese ukhonza.
Isikhathi sokulungiselela Imizuzu ye-5
Isikhathi esiphelele Imizuzu ye-10
Amathiphu, Inyama Ungadliwa
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » General » Amathiphu » Isibindi senkomo esithosiwe esilula
UHector Martinez kusho
Ngibonga kakhulu iresiphi yakho, iyamangalisa
Phendula uHector Martinez
Kuyinto iresiphi elula, kepha kuhle njalo ukukhumbula izisekelo.
Silufaka nini usawoti, uCarmen?
Ama-omelette ama-Shrimp, iresiphi yendabuko evela eCádiz
Amakhukhi we-Chocolate Peanut Butter